Nagu saabsan - Shenzhen Walkers Industrial Co., Ltd.
Muddo 10 sano ah oo aan horumarinay, waxaan u adeegnay macaamiil ka kala socda in ka badan boqol waddan oo adduunka ah, sida Mareykanka, Ingiriiska, Australia, Jarmalka, Ruushka, Brazil, Hindiya, Spain iyo iwm. Waxaan bixinaa kiis tayo sare leh, sidoo kale waxaan ka caawineynaa inay ku guuleystaan ​​tartanka oo ay dhameeyaan mashruuca. Isla mar ahaantaana, waxaan ku kasbanaa jawaab celinta wanaagsan oo aan noqonaa lamaanayaal daacad ah oo lagu kalsoonaan karo muddo dheer.
Warshaddeenu waxay daboolaysaa aag 5000 mitir murabac ah waxayna u shaqaysaa in ka badan 150 shaqaale ah hadda. Warshad cusub waxay ku taalaa Jewelry Industrial Park Changping Town Dongguan City. Warshaddan waxaa iska leh shirkaddeena.
Waxaan haynaa 10 shaqaale R & D ah oo heer sare ah, injineernimo iyo shaqaale farsamo oo samayn kara kiniin cusub oo naqshadaysan iyo kiiska akhristaha si kiisaska cusub loogu sii hayo suuqa, dhanka kale, waxaan sidoo kale samayn karnaa shaybaarro cusub sida ku cad farshaxanka macmiilka markasta si aan ula kulano macaamiisha dalabkooda kala duwan. .
Iyadoo la adeegsanayo 5 qalabka daabacaadda UV, waxaan soo saari karnaa wixii sawirro ah oo daabacan oo wanaagsan si loo daboolo shuruudaha Macaamiisha, 150 shaqaale ah oo leh 5 khadadka wax soo saarka, wax soo saarka maalinlaha ah ayaa gaadhay illaa 10,000 gogo ', waxaannu aqbalnaa OEM, ODM amar la habeeyey oo leh ETA 7-10 maalmo shaqo oo lala macaamiisha astaan. Waxaan sidoo kale u haynaa keyd weyn oo loogu talagalay kiisaska iibka kulul ee caadiga ah sida kiisaska khafiifka ah iyo kiisaska kumbuyuutarka ee kiniinnada iyo e-akhristayaasha iyadoon codsi MOQ ah. Waxaan haynaa koox tayo sare leh oo xakameysa, kiis kasta waa la hubin doonaa ka hor inta aan la rarin. haddii wax tayo tayo leh, waxaan qaadi doonnaa lumitaan buuxa.
Mustaqbalka, waan sii wadaynaa inaanu horumarino oo aan soo saarno tayo wanaagsan oo kiiska daboolida caanka ah. Waad ku mahadsan tahay macaamilka shirkaddayada 'taageerada iyo talo bixinta, wixii intaas ka badan, taageeradaadu waa awoodda guusheena. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadi karno wadashaqeyn wanaagsan waqti dheer. Sababtoo ah taageerada macmiilka, waxaan aaminsanahay inaan ku sii fiicnaan karno warshadaha elektarooniga ah iyo adeegga macaamiil aad iyo aad u tiro badan.
Waxay u dhaqmaysaa, sida kiiska kiniinku u daboolayo jumlada, badeecadeenna ugu weyn waxay leedahay kiimikada kiimikada kiimikada ee kiimikada oo leh dabool qalin leh, kiniin ah!